Maahantulon hybridimalli 11.9.
Dowladdu oo go’aan ka gaartay hirgelinta istaraatiijayadda isku dhafka ah ee ku saabsan xuduud maridda gaadiidka iyo safarka
Xafiiska raysal wasaaraha 11.9.2020 15.22
Dowladdu waxaa fadhigii ay yeelatay 11 bisha sebtember ay go’aan mabda’ ku sal leh uga gaartay, hirgelinta istaraatiijiyadda isku dhafka ah ee ku saabsan xuduud maridda gaadiidka iyo safarka.
Iyadoo la adeegsanaayo nidaam hawleedkaan, ayaa waxaa la qaadi karaa xayiraaddii saarneyd imaanshaha dalka, islamarkaana waxaa laga hortagi karaa faafista xanuunkan safmarka ah ee dhanka xuduudaha.
Xadidaadda cusub waa 25 qof/100 000, mudaddii labada toddobaad ahayd ee la soo dhaafay
Dowladdu waxaa ay ansixisay in ay yihiin dalalka soo ifbixidda ugu sarreysa iyo goobaha soo ifbixista tirada xanuunka qaadday ay tahay 25 xaaladood 100 000-kii ee qof ee kastaaba, mudadii 14 ka maalmood ahaa ee la soo dhaafay.
Dadka waddanka soo galaaya ee ka imaanaya goobaha ama dalalka soo ifbixista xanuunku ay aad u sarreyso, waxaa laga dalbayaa marka laga reebo kooxo xaalado gaar ah leh, in ay wataan shahaado caddayneysa in aanu qabin feyruska korona, taasoo baaristeeda laga qaaday muddo ka yar 72 saacadood. Waxaana dhici karta in dadka waddanka yimaada la geliyo karantiil sida uu dhigaayo sharciga cudurrada faafa. Karantiilkaas waxaa uu dhammaanayaa marka natiijada baaritaanka feyruska korona ee la qaaday ugu horreyn 72 saacadood marka ay ka soo wareegto imaanshaha dalka, ay noqoto mid negatif ah (aan cudurka laga helin).
Haddii mudada uu qofku dalka joogaayo ay ka yar tahay saddex toddobaad, lagama rabo baaritaan kale iyo karantiil toona.
Dadka ka imaanaayaa waddamada ama goobaha soo ifbixista xanuunku uu yahay mid hooseeya (ugu badnaan 25), lagama rabo hawlaha khaaska ah ee kor lagu soo sheegay.
Hay’ada caafimaadka iyo nololwanaagga THL ayaa toddobaadkiiba mar waxaa ay hubisaa hadba xaaladda dalalka iyo goobaha kala duwan ee caalamka, iyadoo mid walba galineysa booska uu leeyahay ee sarreynta ama hoos u dhaca xagga soo ifbixista feyruska. Golaha dowladda ayaa fadhigooda guud iyaguna go’aan kaga gaara isbeddellada suurtaggalka ah ee ku xusan liiska ay soo jeediso ama soo bandhigto wasaaradda arrimaha gudaha.
Dadka u dhashay waddankaan Finland iyo kuwa sida joogtada ugu nool dalkaba, marka ay Finland ku soo laabanaayaan lagama rabo shahaadada baarista. Marka ay ka yimaadaan dalalka soo ifbaxa feyrusku uu aadka u sarreeyo, waxaa talosoojeedin ahaan loo siiyaa in ay iska soo baaraan feyruska, islamarkaana ay karantiil galaan.
Xayiraaddii safarka waa la dabcinayaa
Nidaam-hawleedka ku saleysan baaritaanka ayaa wuxuu u suurtaggalinayaa shirkadaha arrimaha safarka ka shaqeeya in ay hawlahooda u qabsadaan si ka wanaagsan sida ay hadda u shaqeeyaan.
Nidaam hawleedkan waxaa uu suurtaggalinayaa ka soo safrista dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub iyo kuwa ku bahoobay heshiiska Shengen-ka, iyo sidoo kale wadamada ku jira liiska cagaaran iyo safar kooxeedyadaba, marka soo ifbixista feyrusku uu dhaafo xadka 25-ka, haddii safarku uu yahay mid qaadanaaya ugu badnaan 72 saacadood. Haddii safarku uu qaadanaayo wax ka badan 72 saacadood, waxaa lagu dabbaqayaa nidaamka caadiga ee qaabka karantiilka ah iyo in mar labaad la iska soo baaro feyruska.
Ku safrista xadka waqooyiga ee dalka Istooniya, iyo diyaarad ama doon u raacista Sweden waa la fududeynayaa
Dadka shaqada aadaya iyo wadaxiriirka maalinlaha ah ee ka dhexeeya bulshooyinka deggan xuduudka, waxaa loo suurtaggalinayaa ku safrista xuduudka dhanka waqooyi ee dalka, Istooniya iyo diyaarad ama doon ku safridda dalka Sweden, iyadoo aan la iska rabin wax shahaado baaritaan ama karantiil ah, haddii xaaladda faafista cudurka ee goobahaas ay yihiin kuwo u dhigma caddeynta wadamada ee kor lagu soo xusay, iyadoo aan loo fiirineynin xaaladda soo ifbixista feyruska. Dadka kale ee musaafiriinta ah ee ka imaanaya meelaha ka duwan kuwaas, hawlwadeennada xarumaha caafimaadka ayaa sameynaaya baaritaannada iyo hubinta loogu talaggalay goobahaas iyadoo lagu saleynaayo hadba qiimeynta khatarta jirtaa inta ay le’eg tahay.
Sababo la caddeeyay ayay kooxaha gaarka ah ee ka socda dhammaan dalalka oo dhan ay ku iman karaan dalkan Finland
Kooxha arrimaha gaarka ah u socda sida dhaqanka, isboortiga iyo shaqooyinka quud soo saarista, waxaa ay Finland ku imaan karaan, oo xaaladooda looga duwi karaa ku dabqista nidaamka cusub ee la soo saaray, sababo la caddeeyay. Sababahaas waxaa ka mid ah soo kabsashada dhaqaale ee shaqadooda, ama hawlaha lagamma maarmaanka ah ee wax ka taraaya kobcinta cusub ee hawlahooda iyo sugista nidaamka waxqabadka ee ku xiran shardiga ah hawlaha mudada dheer qabashadoodu u dhexeyso.
Shaqo bixiyaha ama jihada kale ee dalka ku martiqaadday waa in ay qofka ama kooxda u soo bandhigaan ama siiyaan arrimaha ammaanka ee u gaarka ah ee ku saabsan qorshahooda waxqabadka, kuwaasoo waafaqsan ama raacsan talosoojedinta heerka qaran ah.
Codsiga waa in lagu soo caddeeyaa qiimaha hawlqabadka qaran iyo sababta aan qaababka kale loo raaci karin, ama sababta ay tahay in loogu oggolaado u fasaxidda dal soo gelista ee wadamada ka baxsan liiska cagaaran, iyo qaababka looga taxaddari doono ama wax looga qaban doono hirgelinta ammaanka caafimaadka.
Tusaalaha dal imaanshaha kooxaha khaaska ah waxaa lagu sheegay waraaqihii lagu soo badhigay shirka jaraa’id iyo go’aanka ay golaha dowladdu gaartay (halkan ayay ku lifaaqan yihiin).
Isticmaalka nidaamkan cusub waxaa uu u baahan yahay in sharciga wax laga beddelo
Nidaamka cusub ee baaritaanka labada goor ah wuxuu u baahan yahay wax ka beddel sharciyada degsan ah, sida wax ka beddelka sharciyada ka degsan adeegyada gaadiidka, kordhinta baaritaanka iyo in mar labaad la waajaho arrin hore u jirtey, iyo hawlaha kale ee wax ka qabanaaya arrimaha la xiriira ammaanka caafimaadka ee dal soo gelista. Kharashyada la xiriira dhammaan nidaamyadaas iyo kordhinta baaritaanka, si buuxda ayaa loo daboolayaa ama loo bixinayaa.
Dowladdu waxaa ay baarlamaanka u gudbineysaa hindise, kaasoo lagu soo jeedinaayo in wax lagu kordhiyo xeerarka cusub ee sharciyada laga dejiyay adeegyada gaadiidka, kuwaasoo ku saabsan hubinta natiijada baaritaanka negatiivka ah, ee la xiriirta cudurrada faafa iyo shahaado dhiibistaba. Baaritaanka hordhaca ah waxaa si dhakhso ah looga rabaa dadka ka imaanaaya wadamada soo ifbixista cudurku uu aad u sarreeyo, kaddib marka uu dhaqangalo sharci beddelka arrinkaa ku saabsan. Qaybta ku saabsan baaritaanka labaad waxaa isticmaalkiisa uu socon doonaa illaa iyo 23.11.2020.
Nidaamka xilliga kalagguurka waxaa uu shaqayn doonaa inta u dhexeysa 1.10.–22.11.
Qiimeynta xadka soo ifbixitsa cudurka ee ah 25 ee waafqasan ilaalilinta xuduudaha xilliga kalagguurka ah, waxaa sidoo kale lagu dabbaqayaa waddamada liiska cagaaran ee Midowga Yurub. Sababaha dal soo gelista la oggol yahay ee waddamada dhaafay xadka qiimeynta, waa kaliya dadka ku nool Finland, Midowga Yurub ama waddamada ku bahoobay heshiiska Shengen, ee soo laabanaya ama sabab lagamamaarmaan ah u imaanaaya.
Dhammaan dadka ku soo laabanaya Finland ee ka imaanaaya waddamada soo ifbixista cudurku ay aadka u sarreyso, waxaa haatan loo soo jeediyaa in ay galaan karantiil iskood ah oo 14 maalmood ah. Inta lagu guda jiro xilliga kalagguurka, dadka imaanaya Finland ee heysta sabab lagammamaarmaan ah ee ka imaanaaya waddamada Midowga Yurub, Shengen iyo sidoo kale waddamada Midowga Yurub ee liiska cagaaran ee soo ifibixista cudurku ay aadka u sarreyso ama dalalka kale ee saddexaad, waxaa laga doonayaa in ay hore isu soo baaraan.
Qofka Finland ku nool ee doonaaya in uu dib ugu laabto waddamada soo ifbixista cudurku uu aad u sarreeyo, waxaa haddii uu doonaayo uu soo gaabin karaa karantiilka u gaarka ah ee uu ku jiro, isagoo si dhakhso ah marka uu Finland yimaado baaritaan u codsanaaya, iyo baaritaanka labaad ugu horreyn marka uu dalka joogay 72 saacadood kaddib. Arrinkaan waa mid fududeynaaya raacista gaadiidka ee safarka shaqada.
Baaritaanka labaad iyo karantiilka, lagama rabo qofka dalka joogaaya wax ka yar 72 saacadood.
Nidaamka xilligan kalagguurka ah waxaa sidoo kale ka qayb ah, kuwa kor lagu soo xusay ee nimaadkan cusub sida kooxaha khaaska ah, iyo dhinaca kale dadka shaqaalaha ah iyo bulshada xuduudaha deggan ee uu u dhexeeyo wada xiriirka maalinlaha ah, sidoo kale dalka Istooniya, iyo diyaarada ama doon u raacista dalka Sweden.
Go’aannada muhiimka ah ee xuduudka waxaa ay dhaqangalayaan 19. sebtember
Golaha dowladdu waxaa ay sidoo kale 11. Sebtember go’aan ka gaareen sii wadista baarista xuduudaha gudaha iyo xadidaadda gaadiidka ee xuduud marista, kuwaasoo dhaqangalaaya 19.Sebtember, waxaana go’aankaas uu socon doonaa illaa iyo 18. bisha Oktoobar.
Ku xigeenka xogheynta Timo Lankinen, xogheynta golaha dowladda, tel. 0295 160 300
Madaxa xafiiska Kirsi Pimiä, wasaaradda arrimaha gudaha, tel 0295 488 203
Madaxa istaraatiijiyadda Liisa-Maria Voipio-Pulkki, wasaaradda arrimaha bulshada iyo caafimaadka ([email protected]; Codsiga la soo xiriirka ku soo dir farriin ahaan telefoonkaan tel. 050 331 0314)
Madaxa Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga Mika Salminen, tel. 029 524 8454
caawiyaha khaaska ah ee wasiirka shaqada Jenny Hasu, wasaaradda shaqada, tel. 295 047 213
Madaxa mashruuca Pipa Turvanen, wasaaradda shaqada (gaadiid raacista ku saabsan safarka shaqo ama hawl loo igmaday qofka), tel. 0295 047 226
Madaxa sharci dejinta Silja Ruokola, wasaaradda gaadiidka iyo isgaarsiinta (isbaarista waddanka laga soo baxaayo), tel. 040 580 0894